Baraarax madow Waaweyn: dad madow! Mudo intee le'eg ayaan sii wadi doonaa inaan u dulqaadanno iibinta-dhaqankeena?
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 1, 2018 00: 50 No Comments
Sideen uga tagnay bikrad madow muraayad bikrad ah? Maalmahan, mukhadaraadka bikradda waxaa lagu caabudo cadaan markay dhab ahaan tahay iyada madaw: cadeynta taariikhda.
Waqti aad u fog, midabka madow wuxuu tixraacayaa wanaagga, wanaagga, faa'iidooyinka iyo dib u soo nooleynta astaamaha, sida lagu caddeeyay iconography of ilaahyadii Gallo-Roomaanka oo leh muuqaal muuqaal leh oo lagu sharfayo khudbadaha dhulka hoostiisa ku saabsan awoodooda gaarka ah ee la xiriira bacrinimada. iyo dhalmada.
Madow waxaa loo roon yahay caalamka 'chtonian', iyo ilmo galeenka hore. Waxay tixraacday waxa aan la arki karin, wixii aan weli la taaban karin oo ahayd inuu ku dhasho, xaalad bikro ah, wixii la abuuri lahaa, farcankii ka soo baxa dhulka oo sugaya inuu ku bislaado.
Qaarkood waxay aabe u yihiin aabbaha muraayadaha madow ee dhaqdhaqaaqa diimeed ee Christian, laakiin runta way ka duwan tahay.
Cibaadada Virgins-ka madow dhab ahaantii waa ka sii da 'weyn tahay, maadaama ay ka soo degto cibaadada ilaahyada hooyada.
Hooyo weyn waxay matalaysay qalabka caanka ah iyo calaamadaha madow by dhagax madow, taas oo caddaynaysa qiimaha ritual iyo calaamadaha midabkaan.
Gabadha madowga ah ee madow, ee loo arko inay yihiin iftiinka nolosha ee mugdiga habeenka cirfiidka, waxay ahayd dheelitirnaan ka soo horjeedda iyo iska hor imaadyada, xitaa illaa iyo hadda si ay u sharraxdo geeridu inay tahay dhalashada mustaqbalka.
Sidaa darteed The Virgins-ka madow waxay ahaayeen kuwa qarsoon ee fariin wax ku ool ah oo gabow ah.
Sep28 06: 22